प्रदेश-६ – Page2– Halkaro
वामदेवलाई सांसद बनाउने अोली प्रचण्डको तयारी, यस्तो छ योजना
प्रकाशित मिति : २०७५, ९ श्रावण बुधबार
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेता वामदेव गौतमलाई सांसद् बनाउने तयारी गरेको छ । उनलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन नेकपाले पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद् धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाउँदै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सांसद् बुढाले राजीनामा दिएपछि डोल्पामा उपनिर्वाचन हुनेछ । वामदेवले नयाँ पत्रिकासँग दुवै अध्यक्षले प्रतिनिधिसभामा तपाईंको आवश्यकता पर्यो, ल्याउँछौं भनेको बताएका […]
कसरी फैलियो जुम्लाबाट प्रहरी जवानको मृत्युको खबर ?
काठमाडौं । विहीबार दिउसो एकाएक राजधानीका अनलार्इन तथा केही प्रशारण संस्थाले जुम्ला घटनामा घाइते प्रहरी जवानको मृत्युको खबर छायो। जुम्लामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा घाइते भएका प्रहरी जवान कमल अाचार्यको मृत्यु भएको खबर प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यमलार्इ दोष दिँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गर्यो। प्रहरी जवानको मृत्यु भएको समाचार गलत थियो। […]
चिकित्सक केसीको स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै
काठमाडौँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सघन उपचार कक्षमा १५ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य जटिल बन्दै गए पनि उनले स्वास्थ्य जाँच गर्न मानेका छैनन्। शुक्रबार साँझदेखि डा.केसी पटक–पटक अर्धचेत अवस्थामा जाने गरेको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा.पुजन रोकायाले बताए । ‘स्वास्थ्य अत्यन्तै जटिल छ,’ उनले भने, ‘शरीरमा अक्सिजन […]
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखी ११ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा.गोविन्द केसीले सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएको बताएका छन्। उनले सरकारले वार्तामा बस्न तयार नभएको भन्दै अनर्गल प्रचार गरिरहेको टिप्पणी गर्दा सरकार तयार भए वार्ता टोली जुनसुकै वेला पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको जनाएका हुन्। ‘यतिका दिनसम्म संवेददनहीन र गैर जिम्मेवारीपूर्ण […]
अनशन बस्न डा. केसी जुम्ला अाए पछि निषेधित क्षेत्र घोषणा
जुम्ला । जुम्लामा केही स्थान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर ल्याउन खोजिएको र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पनि लामो समयसम्म एमबिबिएस पढाइको बाटो खुला नगरेको भनी सोको विरोधमा डा गोविन्द केसी १५औँ अनशन बस्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुगेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सार्वजनिक […]
तारा एयरको विमान जुम्लामा दुर्घटना
काठमाडौं । जुम्लामा तारा एयरलाइन्सको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट जोखिएको छ । नेपालगञ्जबाट जुम्ला गएको कलसाइन नम्बर नाइन एन एइ भीको जहाज दुर्घटनाबाट जोगिएको हो । विमान विमानस्थल अवतरणका क्रममा टायर पञ्चट भई रनवे छेउको नाला कटेरै जोतिएको थियो । विमानमा सबार क्याप्टेन जे के निरौलासहित १८ जना यात्रु सकुसल रहेको यति एयरलाईन्सका बजार व्यवस्थापक भीमराज […]
प्रेम, प्रेमपछिको सम्बन्ध र युवतीको हत्या, दोषीलार्इ कारवाही गर्न पीडित परिवारको माग
काठमाडौं । अछाम कालेकाँडा गाउँपालिका वडा नम्बर ९ स्थित् भानाकोट बल्दे घर भएकी १८ वर्षिया उर्मिला टमटा (टंकी) को रहस्यमय निधन भएको भन्दै उनका आफ्न्तले दोषिको पहिचान गरि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मृतकका दाजुहरु लक्ष्मण टमटा र मदन टमटाले आफ्नी बहिनीको हत्या गरिएको भन्दै हत्यामा […]
प्रधानमन्त्रीको उद्घोषसँगै एकैदिन छायाँनाथ हेर्न १५ हजार पर्यटक रारा पुगे
मुगु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारा –कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को आज यहाँ एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका छन्। सो अवसरमा उनले रारा एक पटक जानै पर्ने ठाउँ भएको बताए । ‘छायाँनाथ हेर्ने हो भने वैशमै जाउँ, बढेशकाल लागेपछि गाह्रो हुँदोरहेछ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले रारालाई पर्यटकीय आकर्षक गन्तव्य बनाइने, जडीबुटीको प्रदेश कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश, […]
अाकाशबाट हुम्लामाथि प्रधानमन्त्रीको दृष्टि, कर्णालीलार्इ अनुकरणीय बनाउँछु
हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजैदेखि विकसित देश बनाउने प्रण गर्न अपिल गरेका छन्। हुम्लाको सिमिकोटमा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुक सधैं पछाडि रहन नसक्ने भन्दै भने, ‘अब देशलाई विकसित बनाइन्छ, पछाडि परेको देशलाई विकसित बनाउने प्रण गरौं ।’ प्रधानमन्त्रीले भूगोल जस्तोसुकै भए पनि सबै ठाउँको महत्व उत्तिकै रहेको बताए। ‘भूगोल सजिलो पनि […]
काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ। ६ वर्षअघि सरकारसित समझदारी गरेको सीटीजीआईले लगानी बोर्डलाई अघिल्लो साता दिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा लाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने दाबी गरिएको छ […]